Man City oo guul raaxo leh ka gaaray Bournemouth, xilli Aguero uu labo gool dhaliyay… + SAWIRRO – Gool FM
(England) 25 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guul muhiim ah kala soo laabatay garoonka Dean Court, kaddib markii ay 1-3 kaga soo adkaadeen kooxda Bournemouth.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood ku kala nasteen 1-2 ay ku hogaaminayeen wiilasha Pep Guardiola ee Man City.
Ciyaarta marka ay aheyd 15 daqiiqo Sergio Aguero ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester City, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Kevin De Bruyne, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0.
Raheem Sterling ayaa daqiiqadii 43-aad ciyaarta ka dhigay 2-0, kaddib kubad qurux badan uu ka helay wiilka reer Spain ee David Silva.
Laakiin kooxda martida loo ahaa ee Bournemouth ayaa soo celisay gool, kaddib markii uu daqiiqadii 45-aad, gool laadka xurta ah ee aad u qurux badan ka dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Harry Wilson, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-2.
Marka dib leysugu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta labada kooxoodba waxay sameeyeen fursado halis ah ee goolal loo filan karay, iyadoo ay Bournemouth ay iska caabin xoogan kala hortagtay Skay Blues.
64 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Sergio Aguero ayaa ka dhigay 1-3, waxaana goolkan caawiyay David Silva.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-3 ay ku adkaatay kooxda Manchester City waxayna heleen saddex dhibcood ay u baahnaayeen inay gacanta ku dhigaan.
"Maan fileynin inaan fariisto kursiga keydka” – Matthijs de Ligt